घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » सरकारी समाचार » UNWTO साउदी अरेबिया मा रोक होल्ड मा: महासचिव Zurab Pololikasvili ठूलो समस्या मा?
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • संघ समाचार • ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • समाचार • मान्छे • साउदी अरब ब्रेकिंग न्यूज • स्पेन ताजा खबर • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
साउदी अरबका पर्यटन मन्त्री अहमद अल खतीब। पर्यटन को वैश्विक दुनिया मा वास्तविक मूभर र shaker छ, जबकि UNWTO महासचिव Zurab Pololikasvi चाँडै एक काम बाट बाहिर हुन सक्छ।
UNWTO मुख्यालय स्थानान्तरण मा रोकिएको छ, तर यो कुनै अर्थमा अझै कथा को अन्त्य हो।
UNWTO मुख्यालय स्पेन बाट साउदी अरेबिया मा स्थानान्तरण स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज र संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस को अविभाजित ध्यान पायो।
Tउनले स्पेनी प्रधानमन्त्री साउदी अरेबियाका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान अल साउद संग फोन कल गरेका थिए। जहाँ UNWTO कदम साउदी-स्पेनिश सम्बन्ध को भविष्य मा एक कल को लागी मुख्य कारण हुन सक्छ।
अचम्मको कुरा, महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पनि सामेल भए। UNWTO का महासचिव Zurab Pololikasvili द्वारा मतदाता हेरफेर को बर्षहरु संग कहिल्यै व्यवहार गरीयो, र अझै पनी न्यूयोर्क मा बेवास्ता गरीएको छ। अब एसजी अब स्पेनी सरकार द्वारा सचेत पछि संलग्न हुदैछ।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक UNWTO कदम मा एक पकड राख्न को लागी हस्तक्षेप अहिले को लागी सफल भएको छ।
स्पेनले अब महासचिव पोलोिकाशविलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ।
स्रोतका अनुसार मा हेरफेर UNWTO कार्यकारी समिति द्वारा UNWTO महासचिव को रूप मा Zurab Pololikashvili को लागी जनवरी पुनः चुनाव प्रकाशमा आउँदैछ। स्पेन को सहयोग संग एक obiously को लागी समर्थन अवैध महासचिव अन्ततः अन्त्य हुन सक्छ।
Zurab को लागी पुन: चुनाव वर्ष को अन्त्य भन्दा पहिले मोरक्को महासभा मा पुष्टि हुनु पर्छ। स्पेन मात्र हैन, तर विश्वका धेरै अन्य देशहरु आफ्नो दोस्रो कार्यकाल को लागी Zurab को पुष्टिकरण को बिरुद्ध जान सक्छन र 2018 को चुनाव बिल्कुलै शून्य हुन सक्छ।
eTurboNews recently रिपोर्ट गरियो कि UNWTO महासचिव वास्तव मा सही ढंगले र कानूनी रूप मा उनको वर्तमान 2018 को कार्यकाल मा चुनेको थिएन।
साउदी अरब को UNWTO मुख्यालय को चाल
जे होस् यो कदम अझै साउदीहरु द्वारा एक आधिकारिक अनुरोध कहिल्यै थियो, यो कहिल्यै स्पेन सरकार लाई लिखित रूप मा प्रस्तुत गरिएको थिएन, न त UNTWO को लागी, साउदी अरब सक्रिय र खुलेआम यो कदम हासिल गर्न मा संलग्न थियो।
यो देखिन्छ कि Zurab Pololikashvili साउदी आफ्नो समर्थन आश्वासन दिएका थिए। उनले स्पेनलाई आफ्नो सहयोगको आश्वासन दिए। Zurab द्वारा स्पेन को लागी उनको समर्थन देखाईएको ट्वीट यस मामला मा उनको दोहोरो अडान को भ्रमित गर्न को लागी मेटाईयो।
eTurboNews विश्वका धेरै पर्यटन मन्त्रीहरु सम्म पुग्यो। उनीहरु सबै सहमत थिए कि उनीहरु साउदी अरेबिया को लागी यस कदम को पक्ष मा मतदान गर्ने थिए, र साउदी अरबले विश्व पर्यटन को लागी दिएको समर्थन को सराहना गरे।
eTurboNews मन्त्रीहरु, एड्स र अन्य अधिकारीहरु संग प्रत्यक्ष र अफ-द-रेकर्ड कुराकानीले स्पष्ट रूपमा यस्तो मतदान को लागी भारी समर्थन को पुष्टि गर्दछ।
यसले वर्तमान UNWTO को साथमा सदस्य राष्ट्रहरुको उच्च स्तरको निराशाको पुष्टि पनि गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप को कारण, मुख्यालय को यो कदम समय को लागी निलम्बित हुन सक्छ, तर यसको वरिपरि वार्ता र छलफल जारी छ जस्तो देखिन्छ।
यो मात्र आशा गर्न सकिन्छ कि साउदी अरब को प्रभाव र सुरक्षित विश्व पर्यटन को लागी वित्तीय बल जारी रहनेछ। अब एक नयाँ बलियो UNWTO, एक नयाँ बलियो वैश्विक यात्रा, र पर्यटन उद्योग को लागी वर्तमान संकट बाट बाहिर आउने मौका छ।
साउदी अरेबिया संग जोडिएको संगै त्यहाँ एक अन्धकार भविष्य को समयमा धेरै पर्यटन मा निर्भर देशहरु को लागी आशा छ।
साउदी अरब यो मुद्दा र स्पेन संग साझेदार समाधान गर्न बुद्धि हुन सक्छ। सायद दुबै देशहरु मिलेर एक महत्वपुर्ण भुमिका निभाउन सक्छन, विश्व पर्यटन संगठन लाई यस क्षेत्र लाई महामारी बाट बाहिर निर्देशित गर्न को लागी महत्व, स्थिति, र प्रभाव लाई फिर्ता ल्याउन को लागी।
मारिया रेयेस मारोटो इलेरा (जन्म १ December डिसेम्बर १ 19 1973३) प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज को सरकार बाट २०१ since पछि स्पेनी उद्योग, व्यापार, र पर्यटन मन्त्री हो।
मन्त्री मारोटोलाई स्पेनमा कमजोर देखिएको छ। स्पेनिस पर्यटन मन्त्री रेयेस मारोटोले सोमबार नहर सुर रेडियो संग कुरा गर्दै ला पाल्मा मा ज्वालामुखी को विस्फोट एक नयाँ सम्भावित पर्यटक आकर्षण भएको सुझाव दिए।, आगन्तुकहरु लाई प्रोत्साहित गर्न को लागी।
आज ला पाल्मा मा ज्वालामुखी बाट लाभा समुद्र पुग्यो। अधिकारीहरु को मुख्य चिन्ता अब विषाक्त बादल हो कि क्यानरी टापु सम्म पुग्न सक्छ, पिघलेको चट्टान र समुद्र को बीच सम्पर्क द्वारा बनाईएको हो।
साउदी अरब संग एक जीत/जीत साझेदारी पक्कै पनी वर्तमान स्पेनी पर्यटन मन्त्री को लागी पट्टी उठाउनेछ।
यो UNWTO सार्न के लिन्छ?
मुख्यालय को एक चाल को अनुमोदन को लागी १०106 भोट को आवश्यकता पर्दछ। यस अनुसार eTurboNews स्रोतहरु, यी मतहरु को 90 ०% को लागी पहिले नै सुरक्षित भैसकेको थियो। त्यहाँ अफ्रिका, अरब संसार, तर क्यारिबियन, र यहाँ सम्म कि केहि युरोपेली देशहरु बाट भारी समर्थन भएको छ।
किन साउदी अरेबिया?
Sअडी अरेबिया यसको २०३० रणनीतिक योजना मा यसको तीन प्राथमिकताहरु को बीच पर्यटन छ।
क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले यो प्रस्ताव गरेका हुन् जान्छ २०३० सम्म जाने योजनामा ​​राष्ट्रिय जीडीपीमा पर्यटन को १% योगदान बाट १०% सम्म।
यो योजना साउदी पर्यटन मन्त्री अहमद अल खतीबले कार्यान्वयन गरेका हुन्।
मध्य सेप्टेम्बर, स्पेनी सरकारले म्याड्रिड, Palacio de Congresos de la Castellana मा भविष्य UNWTO मुख्यालय को लागी एक यात्रा को आयोजन गर्यो।
महासचिव Pololikashvili भ्रमण मा उपस्थित भए तर पछि मन्त्रीहरु रेयेस Maroto र जोसे म्यानुअल Albares संग निर्धारित पत्रकार सम्मेलन बाट भागे। उनले मिडियामा उपस्थित हुन वा मुख्यालय परिवर्तन र रियाद को लागी उनको समर्थन को बारे मा अफवाहहरु लाई अस्वीकार गर्न को लागी चिन्ता गरेनन्।
त्यो थियो जब स्पेनी सरकारले सीधा संयुक्त राष्ट्र संघ जाने निर्णय गरे।
केही महिना पहिले, UNWTO एक दक्षिण अफ्रिकी देश मा एक फोरम को आयोजना गरी ती देशहरु को लागी एक संयुक्त पर्यटन ब्रान्ड को विकास को सल्लाह को बारे मा छलफल गरीयो।
४ 47 अफ्रिकी देशका प्रतिनिधिहरु तीन दिन सम्म बैठकमा भाग लिए। "त्यहाँ महासचिव ती सबै संग निजी कुरा गर्न सक्षम थिए, र अन्य महाद्वीपहरु बाट साक्षी बिना।
पैसा कि साउदी अरब सञ्चालन मा राख्न को लागी इच्छुक थियो ती सबै देशहरु को यात्रा र पर्यटन परियोजनाहरु को लागी धेरै राम्रो गरीएको थियो।
एक स्पेनी व्यापार मिडिया मा एक रिपोर्ट अनुसार स्पेन र UNWTO बीच सम्बन्ध असाधारण तर सभ्य कहिल्यै थिएनन्। "स्पेनले तथापि Zurab को लागी अर्को उम्मेदवारी को बिरूद्ध एक स्पेनी उप सचिव को लागी मतदान गरे।"
UNWTO को मुख्यालय भएको तथ्यले स्पेनलाई पर्यटन को विश्व राजधानी बनाउँदैन, केहि देख्न चाहनेहरु को विपरीत।
"स्पेनिस सरकारलाई बिरलै थाहा छ कि मुख्यालय बिल प्रत्येक महिना स्वचालित रूपमा भुक्तान गरिन्छ र बैंक ट्रान्सफर को आदेश दिने अधिकारी बाहेक अरु कसैलाई थाहा छैन, जुन अझै स्वचालित छ।" स्पेन UNWTO मुख्यालय को लागी तिर्दछ। यो सबै स्पेन को बारे मा २ मिलियन यूरो एक बर्ष खर्च हुन्छ।
यो UNWTO महासचिव को आरोप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम स (्गठन (ILO) र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का महानिदेशक को रूपमा उस्तै: $ २०,००० प्रति महिना १२ मासिक भुक्तानी = $ २,४०,००० को लागी। उनले आवास प्लस कार र चालक को लागी एक वर्ष € 20,000 प्राप्त गर्दछ। महासचिव UNWTO द्वारा भुक्तान गरिन्छ, स्पेन होइन।
प्रत्येक राष्ट्र UNWTO को एक सदस्य हुन को लागी तिर्छ जीडीपी मा निर्भर गर्दछ, जनसंख्या, र पर्यटक व्यञ्जनहरु कि यो लागू हुन्छ। त्यो रकम संगठन को बजेट को ५% भन्दा बढि हुन सक्दैन।
सबैभन्दा धेरै तिर्ने देशहरु फ्रान्स, चीन, जापान, जर्मनी, र स्पेन हुन्, जसले प्रत्येक बर्ष लगभग ३५357,000,००० यूरो योगदान गर्दछन्। कम से कम तिर्नेहरु सेशेल्स र समोआ हो, प्रति वर्ष १,,16,700०० यूरो को शुल्क संग।
UNWTO पर्यटन उद्योग र गन्तव्यहरु को लागी धेरै कम मूल्य ल्याउँछ। खराब ध्यान केन्द्रित, एक बजेट बिना १२ मिलियन डलर एक वर्ष, जसको %०% तलबमा जान्छ-, यसको देशहरु द्वारा नियुक्त अधिकारीहरु संग। आन्तरिक भ्रष्टाचार र स्थिरता र पुराना अप्रचलित अभ्यास सधैं एक मुद्दा भएको थियो।
UNWTO हाल छ 159 सदस्यहरू। संयुक्त राष्ट्र संघका १ 193 ३ देश सदस्य छन्।
संयुक्त राज्यले १ 1995 ५ मा UNWTO, १ 1997 in मा बेल्जियम, २०० in मा बेलायत, २०१२ मा क्यानडा र २०१४ मा अस्ट्रेलिया छोडेको थियो।
साथै, अनुपस्थिति आयरल्याण्ड, साइप्रस, न्यूजील्याण्ड, लक्जमबर्ग, र सबै नॉर्डिक देशहरु: आइसल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, र डेनमार्क, प्लस दुई बाल्टिक देशहरु, एस्टोनिया र लिथुआनिया UNWTO एक कमजोर संगठन बनाउन।
यो स्पष्ट छ UNWTO को लागी एक नयाँ दिशा यो संयुक्त राष्ट्र संग सम्बद्ध एजेन्सी को लागी बाँच्न को लागी आवश्यक छ।
अहिलेसम्म साउदी अरेबियाले जवाफ दिएको छ UNWTO र विश्व पर्यटन विश्व मा कुनै अन्य देश जस्तै पूरै। त्यहाँ अर्को कदम हुनेछ, त्यो निश्चित छ।